कर्मचारीको मिलेमतोमै साटियो धितो जग्गा ! - Samadhan News
कर्मचारीको मिलेमतोमै साटियो धितो जग्गा !
समाधान संवाददाता २०७६ कार्तिक ३ गते १२:१८
पोखरा महानगरले पोखराका मुख्य क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थित गर्न र शुल्क उठाउन २०७३ सालमा अशेष निर्माण सेवालाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसबेला महानगरले २ वर्षको सम्झौतासहित २ करोड ८८ लाखमा उक्त कम्पनीलाई टेन्डर दियो । जसको अवधि सकिएको १ वर्ष बितिसकेको छ ।
महानगरले कम्पनीबाट १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । सम्झौता सकिएको वर्ष दिन बित्दा कम्पनीसँग बाँकी रहेको रकम उठाउन सकिरहेको छैन । त्यसकारण केही समयअघि मात्रै बक्यौता असुल उपर गर्न समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा पोखरा ३ का अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजू र सदस्यमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेल तथा अधिकृत शिवहरि शर्मा छन् ।
महानगरले हाल १ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीबाट असुल्ने र बाँकी ६२ लाख रुपैयाँ धितो राखेको जग्गाबाट असुल्ने बताएको छ । ‘महानगरले आफ्नो रकम जसरी पनि असुल्छ, त्यसका लागि हामीले केही समयपछि सूचना प्रकाशित गर्छौं । जग्गाधनीले सूचना बमोजिम पैसा बुझाउन आए फुकुवा हुन्छ । नत्र लिलामी प्रक्रियामा जान्छौं,’ समितिका सदस्य शर्माले भने । तनहुँ म्याग्देमा उमेश गौतमको नाममा रहेको २७ रोपनी जग्गा धितो राखिएको छ ।
साटियो धितो जग्गा !
पार्किङको ठेक्का लिएको कम्पनी अशेष निर्माण सेवाले सुरुमा बैंक ग्यारेन्टी कृष्णकला केसीको नाममा पोखरा १० मा रहेको ३ सय ३३ वर्गमिटर जग्गा राखेको थियो । तर, हाल सो जग्गा धरौटीमा देखिँदैन, फुकुवा भइसकेको छ ।
केसीको उक्त जग्गा २०७४ चैत ९ गते नै फुकुवा भइसकेको महानगरसँग कागजात छ । त्यसको सट्टा तनहुँ जिल्लाको साविक छाङ गाविसमा उमेश गौतमको नाममा रहेको २७ रोपनी जग्गा रोक्का भएको छ । जुन जग्गा २०७४ कात्तिक ६ गते रोक्का भएको देखाइएको छ ।
‘पोखराको जग्गा फुकुवा कहिले भयो ? कुन प्रक्रियाले भयो ? पोखरामा धरौटी राखेको परिवर्तन भएर जग्गा कसरी तनहुँ पुग्यो ? मलाई महानगरले कुनै जानकारी दिएको छैन,’ अशेष निर्माण सेवाका ऋषिराम गौतमले फोन सम्पर्कमा भने, ‘कर्मचारीको मिलेमतोमा फसाउन खोजिएको छ ।’ उनले आफ्नो कम्पनीका लागि रोक्का गरिएको जग्गा आफूलाई जानकारी नै नदिइ साटफेर गरेको आरोप लगाए ।
‘धितो राखेको जग्गा कसरी परिवर्तन भयो त ?’ यसबारे महानगरका कर्मचारी नै अनभिज्ञ छन् । महानगर राजस्व शाखा अधिकृत छविलाल शर्मा पनि धितो राखेर रोक्का भइसकेको जग्गा साटफेर गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘यसरी यताको उता, उताको यता त गर्न नमिल्ने हो,’ उनले भने ।
हाल धितोमा रहेको तनहुँ म्याग्देको जग्गा रोक्का र पोखरा १० मा फुकुवा भएको जग्गामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलको हस्ताक्षर छ । पौडेलकै मिलेमतोमा रोक्का महानगरले रोक्का गरेको जग्गा साटफेर गरेको आरोप महानगर स्रोतको छ । महानगरसँग भएको अभिलेखमा तनहुँ छाङको जग्गा रोक्का भएको ५ महिनापछि पोखराको जग्गा फुकुवा भएको देखिन्छ ।